Sunday March 24, 2019 - 21:30:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in maalinta berri ah uu saxiixayo qaraar maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda ah siinaya dhulka Buurlayda Al Jowlaan ee kala qeybiya wadanka Falasdiin iyo Suuriya.
Tallaabada Trump ayaa ka caraysiisay malaayiin qof muslimiin ah oo ku dhaqan daafaha caalamka waana tallaab kale oo Mareykanku Yahuudda ugu gacan gelinayo dhulalka Filasdiin ee ixtilaalka ku jira muddo ka badan Nus qarni.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay kamid tahay maamullada dabadhilifyada caalamka kajira ee taageersan qorshaha Trump uu Buuralayda Al Jowlaan ugu gacan gelinayo Yahuuda sida uu sheegay mas'uu sare oo katirsan Yahuudda.
Fadhi jimcihii lasoo dhaafay ay magaalada Geneva ku yeesheen xubnaha waxa loogu yeero Q.Midoobe ayay uga doodeen sida laga yeelayo qorshaha Donald Trump ee Yahuudda usharciyaynaya buuraleyda Al Jowlaan.
Faadumo Insaaniya oo ah safiirrdda dowladda Federaalka ufadhiya Geneva ayaa isaga aamustay codkii loo qaadayay qaraarkii lagu diidayay go'aanka Trump.
Arrintan ayaa banaanka soo dhigaysay sida ay isugusii dhowaanayaan maamullada Yahuudda iyo dowladda Federaalka balse sarkaal katirsan waxa loogu yeero Israa'iil ayaa dhankiisa xaqiijiyay in maamulka Yahuudda iyo dowladda Federaalka ay iskusii dhowaanayaan isagoo tusaale usoo qaatay mowqifkii taageerada ahaa ee dhawaan DF-ka umuujisay go'aanki Trump kadib markii ay isaga aamustay soo jeedin katimid dowladda Pakistan oo lagu dhaleecaynayay in Buuraleyda Al Jowlaan lasiiyo Yahuudda.
Moshe Tardiman oo ah mustashriq Yahuudi ayaa maqaal uu qoray ku sheegay in waxa loogu yeero Israa'iil ay diblumaasiyadeeda ujihaysay dhanka qaaradda Afrika wuxuuna muujiyay in uu jiro iskusoo dhawaashiyo kala dhaxaysa dowladda Farmaajo.
Wuxuu carrabaabay in uu wanaagsanyahay cilaaqaadka ka dhaxeeya maamulka Yahuudda iyo wax uu ugu yeeray labada dowladood ee kajira Soomaaliya oo uu ku kula sheegay maamulka isku magacaabay Somaliland iyo DF-ka.
Moshe Tardiman wuxuu aad u bogaadiyay tallaabadii ay qaadeen wakiillada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Q.Midoobay oo iska diiday in ay dhaleeceeyaan dhulka boobka Yahuuddu ay ka waddo Filasdiin.